Senator Abshir Bukhaari “Dad aan xeer lahayn waa xoolo aan xero lahayn” – Kalfadhi
Aragti Baarlamaanka Senator Warar
“Dad aan xeer lahayni waa xoolo aan xero lahayn” oo hadba meesha ay fariistaan ay xero u tahay. ‪- Murti Soomaaliyeed
‪- Qabka qofka iyo kan qabiilka ayaa ka sareeya Diinta, Dastuurka iyo Xeerarka dalka iyo kuwa bulshada ay wadaagaan.
– Fahamka saamileyda siyaasadeed ee dowladnimada waa in tahay madal looga shaqeeyo xaqiijinta danta gaarka ah iyo tan qabiilka iyo in lagu gaaro awood siyaasadeed iyo hanti kororsi ee ma ahan madal looga sameeyo isbedel togan nolosha dadka iyo horumarka dalka.
‪- Garwadeenka siyaasadeed, midka dhaqanka & kan diintu waa Kelitalis; Aniga keliya ayaa wax og. La tashiga iyo talowadaagu waa doqonimo sida ay u arkaan.
– Haddii ay siyaasiyiinta Soomaalidu isku maandhaafaan arrin ummadeed ha ahaato maamul ama siyaasad waxaa halbeeg u ah “Cadkaanow uma ku cunay ama ku ciideeyey” ee ma sameynayaan isu tanaasul, garowshiiyo iyo garqaadasho.
– Waxa ay u baahan yihiin in loo kala ergeeyo ama la dhexdhexaadiyo maxaa yeelay ninkii (Ku gaar ah Ragga, Gabdhaha ma ahan sidaas) laga guuleystaa waa doqon laga karti badan yahay; Xalku Waa In La Kala Adkaado oo keliya.
WAX BAA INAGA MAQAN EE WAA MAXAY?
W/Q:-Sanator Abshir Bukhaari.